Izitudiyo zentengiso kunye nezerente eLondon
I-1-10 yoluhlu lwe-4577
I-Aston Square iyazidla ngokubonisa eli gumbi litsha elinobunewunewu bendlu yokuvumela ngegumbi langaphakathi lanamhlanje kwaye limnandi ilitye lilahle kude kwindawo evulekileyo eluhlaza e-Wanstead Heath kunye nokuhamba ngebhasi kwimizuzu emihlanu ukuya ku-Wanstead Park Station (Ngaphezulu). Eli gumbi linikezela: ...
Esi sakhiwo sihle sithandwayo sisibonelelo sakwigumbi lokulala eliyimpinda eyahlukileyo kunye nendawo esecaleni. Le ndlu ihleli kumgangatho ongezantsi kwaye ibekwe kufutshane yokuhamba ukuya kwiNkundla yase-Earl nakwisikhululo seGloucester Rd. Zonke iintlawulo zamatyala kubandakanya
Isitayile esifanelekileyo sesitayile xa kuguqulwa ixesha Ibekwe ngokufanelekileyo kwimizuzu nje yokuhamba umgama ukusuka kwiSitalato iKing's Cross neSt Pancras International. Ifumaneka kwangoko.
Ukubhekiswa kwiPropati: 730756.Zonke iintlawulo zemali zibandakanyiwe ukususela nge-2020 ka-Epreli ngo-3. IFlat yindawo ebanzi ephindwe kabini yendawo yokuhlala ekhitshini kunye nekhola yecala.Ukusebenza kuyakhiwa (ayikokuguqula!) Kwaye kubekwe kumgangatho wesithathu. Ukulungiswa kukwanayo. ukuphakanyiswa.Imiboniso efumanekayo ngesicelo ...
Indawo ekuyo iChase ibonelela lo mhlaba mtsha utsha nje, ubuchule be studio obucekeceke ukuze ubhatale ngaphakathi kwiZiko ledolophu lase-Uxbridge.Ixabiso lamanzi ombane libandakanyiwe. IBhunga liya kuhlawulwa ngabaqeshi.Le Studio iquka: Ikhitshi elifanelekileyo, igumbi lokuhlambela lokuhlambela kunye nobukhulu obuhle boku ...
Intengiso emnandi ye-studio engu-XNUMX yoZenzele ye-Flat eNtsha, iza negumbi elikhulu le studio kunye ne Khitshi egcweleyo kunye nomatshini wokuhlamba, igumbi lokuhlambela elenzelwe itawuli kunye ne w / c. Iflethi ifakwe ngokupheleleyo. Ipropathi ibekwe kumgangatho wokuqala kwaye iza nokudibanisa kabini, ukubeka phantsi komthi ...
Le ndlu intle kakhulu yesitayile seManhattan isitayile e-Emery Wharf, eLondon Dock. Olu phuhliso lukhona nje ukusuka kwiTower Bridge nakwiNqaba yaseLondon. Le ndlu inesicwangciso esivulekileyo ekhitshini yindawo yokuhlala enendawo eyaneleyo yokutyela, indawo enkulu yokulala enendawo yokuyalela yelo xesha ...
Isitudiyo: I studio ezimbini kumgangatho wokuqala wesakhiwo, kangangemizuzu eli-10 ukusuka eHammersmith Ngaphantsi komhlaba. Imithetho engenayo.Ingcaciso ngokubanzi: I studio ezimbini kumgangatho wokuqala wendlu yeVictoria. Kumgangatho ongaphezulu womgangatho ophathwayo, ikhitshi elincinci elifanelekileyo, igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela, umatshini wokuhlamba okwabelwana ngawo. ...